बजार परिसूचक ह्वात्तै घटेर नेप्से १५ सय अंकभन्दा तल झरेपनि कमाउनेमा को–को परे ? « Arthatantra.com : A Complete Economic News Portal From Nepal.
काठमाडौ । आइतबार सेयर बजार २६.३५ अंकले घटेर १४९६.४६ अंकमा झरेको छ । यसदिन व्यापारिकबाहेक सबै समूह घटेका छन् । सबैभन्दा धेरै बीमा समूह १५७.०६ अंकले घटेको छ । व्यापारिक समूह भने २.७ अंकले बढेको छ ।
परिसूचकमा उल्लेख्य गिरावट आएपनि कारोबार रकम भने बढेको छ । दिनभरिमा १५९ वटा कम्पनीको १५ लाख छ हजार चार सय चार कित्ता सेयर सात हजार तीन सय १८ पटक खरिदविक्री हुँदा ६३ करोड १२ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ ।
नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको तीन करोड तथा नेपाल टेलिकम, स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको दुई करोडमाथिको कारोबार भएको छ । सनराइज बैंक, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी प्रोमोटर, एनबि बैंक, एभरेष्ट बैंक, सिद्धार्थ बैंक, जनता बैंक लगायतको एक करोडमाथिको कारोबार भएको छ ।
जम्मा १८ वटा कम्पनीका सेयरधनीले कमाएका छन् । समता माइक्रोफाइनान्सका सेयरधनीले सबैभन्दा धेरै ९.८७ प्रतिशत र ङादी ग्रुप पावरका सेयरधनीले ५.२२ प्रतिशतका दरले कमाएका छन् । आरएसडीसी लघुवित्त, महुली सामुदायिक लघुवित्त, कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक, ललितपूर फाइनान्स, भार्गव विकास बैंक, छ्याङ्दी हाइड्रो, एनआईसी एशिया बैंक, मल्टिपर्पोज फाइनान्स लगायतका सेयरधनीले पनि कमाएका छन् ।